GNU / Linux အောက်တွင်အကြံပြုထားသည့်အသံသင်ခန်းစာများ Linux မှ
GNU / Linux အောက်မှာအကြံပြုထားတဲ့အသံသင်ခန်းစာ
ကွဲပြားခြားနားသောအခမဲ့မာလ်တီမီဒီယာဖန်တီးမှုကိရိယာများကိုမလုပ်ဆောင်မီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ Hispasonic မှပြုစုသောဆောင်းပါးတွဲများကိုသင့်လက်ထဲထည့်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ပို၍ အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည့်“ ကွန်ယက်” တွင်ပါဝင်ခြင်းထက်ပိုသောအကြောင်းအရာများကိုထပ်ခါတလဲလဲရှောင်ရှားရန်ဤရည်ရွယ်ချက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဤအစီအစဉ် မှနေ၍ ဤပရိုဂရမ်များကိုလက်တွေ့ကျကျအသုံးပြုရန်အာရုံစိုက်ရန်ကြိုးစားမည်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်ကျလွန်းခြင်းနှင့် ပိုမို၍ ယေဘူယျဖြစ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်း။ ထိုနည်းတူစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုလက်စွဲစာအုပ်များစုဆောင်းလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့အားစာရင်းပြုစုရန်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မည်။
1 System Settings နှင့် JACK အသံဆက်သွယ်မှု Kit
System Settings နှင့် JACK အသံဆက်သွယ်မှု Kit
UsemosLinux ၌ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံး GNU Audio entriess များသည်ယေဘူယျစနစ်ကိုပြင်ဆင်ရန်နှင့်သင့်အတွက်ပထမအဆင့်များကိုကယ်တင်ရန်လက်တဆုပ်စာမျှင်များရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ "latency low" system တွင်ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာသိရန်ထိုက်တန်ပါသည် (ဤအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Linux နှင့်စတင်ဆော့ကစားနိုင်ပါမည်လား) ။ နောက်ဆုံးပေါ် kernel ဗားရှင်းများနှင့် realtime kernel ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော်လည်း၎င်းကိုနှစ်သက်သူမှာလူအများရှိနေသေးသည်။ ဤအရာအလုံးစုံအတွက်အာဂျင်တီးနား SounDebian ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်သင်၏အမှတ်အသားများတွင်ရှိနေသင့်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်လက်စွဲစာအုပ်ကောင်းတစ်ခုပါရှိသည်။
Ubuntu 12.10 ကို Multimedia authoring distro သို့ပြောင်းပါ
Linux အောက်တွင်တေးဂီတဖန်တီးမှု၏အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းမှာ JACK ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီနေရာတွင်သင် "ယောက်ျားများကိုချည်နှောင်ခြင်း" နှင့်သင်တို့၏ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ဆုံးရှုံးဖို့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ထက်ပိုသောပြproblemနာတစ်ခုကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံကစိတ်ရှုပ်သွားသောသုံးစွဲသူများအများစုသည် "သူတို့သည်ညွှန်ကြားချက်များကိုမှန်ကန်စွာမဖတ်ရသေးသောကြောင့်" ဟုကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံကပြောပြသည်။
၄ င်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအနည်းဆုံးနားလည်ရန်မှာအခြေခံကျသည် (၎င်းသည် Linux အောက်တွင်ကောင်းမွန်စွာစမ်းသပ်ပြီးသောအသံ hardware ကိုရွေးချယ်သော်လည်း၎င်းသည်ပေါင်းစပ်ထားသောကဒ်များဖြင့်ပြproblemနာမရှိဘဲအသုံးပြုသည်) ။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရ Semicorchux သင်ခန်းစာများ (Hispasonic ရှိ Pablo_F) သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မေးခွန်းများဖြေဆိုရန်နှင့်ထိုဖိုရမ်များတွင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုအထောက်အကူပြုရန်သူတို့အမြဲတမ်းရရှိနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်၊ JL ၏နောက်ဆုံးပေါ်လုပ်ဆောင်မှုကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသော AvLinux လက်စွဲစာအုပ်မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်ုပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သည်။
ဂျက်ရဲ့ 1/2 configuration ကို
ဂျက်ရဲ့ 2/2 configuration ကို
JACK Audio Connection Kit မိတ်ဆက်
Ardor သည် GPL audio software ၏ "လှပသောမိန်းကလေး" ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် version3ထွက်ကတည်းက မှစ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သည် (ရိုးရှင်းသော်လည်း "alpha" ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူ) အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ Qtractor ဖြစ်သည်။ Ardor နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ချက်အများစုကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်။
ယခုအချိန်အထိ version 2.8 အတွက်အင်္ဂလိပ်စာနှင့်စပိန်ဘာသာဖြင့် SounDebian တွင်ရရှိနိုင်သည့်လက်စွဲစာအုပ်အပြည့်အစုံရှိသည်။ ၎င်းတွင် Ardor3 လက်စွဲ၏ယာယီဗားရှင်းကိုထည့်ထားသောလက်ရှိအင်္ဂလိပ်ကိုသာဖြစ်သည်။ အသစ်သောအဘို့အထူးဖော်ပြချက် အွန်လိုင်းလက်စွဲစာအုပ် သူတို့ရဲ့ website တွင်ရရှိနိုင်ပါ။
ဒါပေမယ့်ဟုတ်ပါတယ်၊ သုံးစွဲသူများကိုကျွန်တော်သိပြီးပါပြီ။ စာမျက်နှာ ၂၀၀ ပါတဲ့လက်စွဲစာအုပ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မထုပ်ပိုးချင်သေးပါ။ ကောင်းပြီ၊ YouTube ရှိတာကြောင့်ငါတို့ကံကောင်းနေပြီ။ ဗားရှင်း ၃ နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်အခါ Ardor နှင့်ဗွီဒီယိုများကိုမိတ်ဆက်နိုင်သည် Andriu (စ Hispasonic အသုံးပြုသူ) နှင့် Radialistas.
အပြီးသတ် (ဒီမဟုတ်ရင်ဒီ entry ကြီးမားပါလိမ့်မယ် ... ), ငါအချို့ပိုပြီးတိကျတဲ့ဆောင်းပါးများကိုကိုးကားပါလိမ့်မယ်:
Irwin Cespedes (Altiplane) ကဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းပြတယ် SideChain ချုံ့ Ardor3 နှင့်အတူ။
နားကပိုမပေးတဲ့အခါရောင်စဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ကိရိယာကိုသုံးပြီးအကူအညီပေးနိုင်တယ် နွားသငယ်ကို Analyzer.
ကျွန်ုပ်သည် synthesizers ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ဤနေရာတွင် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) စာရွက်စာတမ်းများကိုသင်အကြံပြုထားပါသည် Seq24 y ပုသိမ်.
နောက်ဆုံးဆောင်းပါး « Guitarix ဖြင့်ပထမဆုံးဂီတာသံကိုဖန်တီးသည်။ဤစီမံကိန်းဝီကီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပိုပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ...
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » GNU / Linux အောက်မှာအကြံပြုထားတဲ့အသံသင်ခန်းစာ
ရွိုင်း batty ဟုသူကပြောသည်
ဒေါက်တာ Malvedades ... LOL
Roy Batty အားပြန်ပြောပါ
x264 ဗွီဒီယိုကို Avidemux ဖြင့်တည်းဖြတ်ခြင်း။